Suunto Spartan Tababaraha, smartwatch-kaaga ciyaaraha oo dhan | Androidsis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Smartwatch, Tababarada
Haddii aad raadineysay smartwatch oo kugula socon kara dhammaan cayaarahaaga, jooji raadinta. Suunto waxay soo bandhigeysaa saacad dhan oo dhul ah oo kuu noqon doonta saaxiibkaaga kuugu habboon, nooc kasta oo isboorti ah oo aad sameyso. The Suunto Spartan Tababaraha Waxaa loo maleeyay inay iska caabbiso dhaqdhaqaaqa jireed ee aan ka doorano dhinackeena.
Un Xaqiijin sare, saacad GPS culus oo culus taasi waxay ballanqaadaysaa waxqabad aad u sarreeya intaad rabto inaad dalbato. Iyadoo Cabbiraad XNUMX-saac ah maalin kasta oo ka mid ah usbuuca. Xakamee adiga nasasho, kalooriye ama garaaca wadnahaaga jaleeco.
Suunto Spartan Tababaraha saaxiibkaaga ugu fiican isboortiga
Smartwatch-kan xoogga leh ayaa ah kii ugu dambeeyay ee Suunto ee khamaarista si uu u keeno kala duwanaansho suuqa. Haddii aad oroddo, ama aad fuusho baaskiil, ama dabbaasha ayaa ah shaygaaga, kani waa saacaddaada. Laakiin haddii aad ku tababarto wax kale oo isboorti ah, sidoo kale. The Tababaraha Suunto Spartan waa daawashadii ugu horreysay ee isboorti badan. Iyadoo in ka badan siddeetan qaab isboorti oo horay loo sii rakibay heer ahaan waxay diyaar u tahay waxkasta oo aad rabto.
Qiyaasaha waqtiga dhabta ah iyo kormeerka. GPS leh suurtagalnimada hordhaca wadada iyo waddooyinka. Daawasho dhameystiran dhan walba. Si fudud loo isticmaalo, miisaan fudud iyo unisex. Iyada oo leh naqshad soo jiidasho iyo xarrago leh, waa smartwatch oo adkaysi u leh sida ay isha ugu riyaaqdo. Ka dooro qaabkaaga moodooyinka la heli karo oo sii dhammaan waxaaga.
Tababaraha Suunto Spartan wuxuu balan qaadayaa mudada ilaa toban saacadood oo leh habka tababarka oo firfircoon. Oo ilaa afar iyo toban maalmood oo aan dib loo buuxin iyadoo la adeegsanayo waqti keliya. Shaashaddaadu waxay leedahay bandhig aad u dareen leh taas oo runtii fududahay in la maareeyo. Awoodda konton mitir quusid. Iyada oo leh miisaanka 56 garaam caqabad ku noqon mayso helitaanka diiwaankaaga ugu fiican.
Waxay leedahay a muraayadda dhalada lagu xoojiyay muuqaalka polyamide ee xalka 218 x 218 loogu talagalay muuqaalka weyn ee dibedda. Xarig silikoon iska caabin ah oo aad ku beddeli karto midabka adiga kugu habboon. La soco dhaqdhaqaaqaaga oo si fudud ula soco isbeddelka isboortigaaga.
Tababaraha Suunto Spartan ee Wrist HR ayaa la iibin doonaa dhamaadka Agosto. Shirkadda Finnishku waxay u iman doontaa inay si toos ah ula tartanto noocyada kale ee qaybta iyagoo isku dayaya inay bixiyaan fursado badan oo ah qaab naqshadeysan oo adkeysi leh. Ku celcelinta jimicsiga aad jeceshahay oo aad ku xirnaato hadda waa suurtagal adigoon ka baqayn smartwatch-kaaga. Ma rajeyneyso isku daygeeda?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Smartwatch » Suunto Spartan Tababaraha, smartwatch-kaaga dhammaan cayaaraha